Zimbabwe Archives - City People Magazine
Wife Bites Off Husbands Penis During Fight
by Damilare Salami May 4, 2019
A Beitbridge, Zimbabwean man almost lost his penis after his wife bit off a chunk of it during a fight. According to a source, Sibangilizwe Ngamula’s marriage was always a…
Protesters Leave Five Dead In Zimbabwe After Fuel Hike
A human rights group in Zimbabwe says five people were killed in clashes between demonstrators protesting fuel hikes and security forces who opened fire on some crowds. The Zimbabwe Association…
Zimbabwe To Employ Retired & Unemployed Nurses To Replace Striking Nurses
Health authorities in Zimbabwe will today start recruiting retired and unemployed nurses to fill 15,000 vacancies left after the government fired all nurses in state hospitals. An advisory letter orders…
Zimbabwe President Mnangagwa Pardons 16 Inmates On Death Row
by Damilare Salami March 27, 2018
President Emmerson Mnangagwa of Zimbabwe has ordered a presidential pardon to save the lives of 16 inmates who were on death row, Zimbabwe Prisons and Correctional Services said Prisons and…
New Dawn: Mnangagwa Sworn In As Zimbabwe President
by Reporter November 24, 2017
Emmerson Mnangagwa was sworn in on Friday as President of Zimbabwe in Harare, bringing the final curtain down on the 37-year rule of Robert Mugabe. Taking his oath of…
by Reporter November 22, 2017
Zimbabwe’s former vice president Emmerson Mnangagwa will be sworn in as president today or tomorrow, ZANU-PF legal secretary Patrick Chinamasa told Reuters, after the resignation of Robert Mugabe. Separately, ZANU-PF…